“Xadhiga Loo Gaystay Muktaar Roobow Waa Sharci Daro” Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Ayaa Sidaasi Sheegay | Raadgoob
“Xadhiga Loo Gaystay Muktaar Roobow Waa Sharci Daro” Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Ayaa Sidaasi Sheegay
Gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal oo goordhaw shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu uga hadlay xariga loo geestay Sheekh Muktaar Roobow Abuu Mansuur iyo rabshadaha ka dhacay magaalada Baydhabo.
Maxamed Mursal ayaa ugu horey ka tacsiyeeyay dadkii kala duwanaa ee ku dhintay rabshadihii ka dhacay magaalada Baydhabo uu ku jiro Gudoomiyihii guddiga Amniga ee Baarlamaanka Koonfur Galbeed .
Gudoomiyaha golaha shacabka ayaa xadhiga loo geestay Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur ku tilmaamay mid sharci daro ah, waxa uuna sheegay Abuu Mansuur in dhamaan uu biixiyay sharuudihii laga rabay uuna xaq u lahaa in uu tartamo.
Waxa uu sheegay Gudoomiyaha golaha shacabka in xariga Abuu Mansuur aan loo marin wadadii saxda aheyd, waxa uuna sheegay in khalad tahay in awooda dowlada loo adeegsado xarig iyo meel ka dhac .
Gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ku baaqay in lasoo daayo Sheekh Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur loona ogolaado in Baydhabo dib ugu laabto si uu uga qeyb galo doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed .
” Waxaa nasiib daro ah in dhimasho, dhaawac iyo bur bur hantiyadeed uu ka dhasho qabashadii Abuu Mansuur oo loo soo xiray si baal marsan sharciga, maadaama aan amar maxkamadeyd aan lagu soo qaban ” Ayuu yiri Maxamed Mursal.
Gudoomiyaha golaha shacabka ayaa sidoo kale cadeeyay in shacabka Koonfur Galbeed ay ka biyo diidsan yihiin fara galinta Xukuumada ku heyso doorashada Koonfur Galbeed , waxa uuna cadeeyay in uu horey uga digay dhibaatada maanta taagan.
Maxamed Mursal ayaa ugu baaqay Guddiga Doorashada Koonfur Galbeed Soomaaliya in ay dib u dhigaan doorashada Madaxweynaha Koonfur Galbeed inta laga helayo jawi xasiloon oo ku haboon doorasho xur iyo xalaal ah.
Ugu dambeyn gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ugu baaqay Odayaasha dhaqanka iyo Koonfur Galbeed iyo shacabka ugu baaqay in laga shaqeeyo sidii xasiloonida loogau soo celin lahaa magaalada Baydhabo ay ka dhaceen rabshado xoogan.